Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0413 zom
Zoma 25 Jan.
Boky momba an'Andriamanitra sy ny fïfandraisany amintsika olombelona sy amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity ny Baiboly. Tsy manam-paharoa sy mihoatra ny herin'olombelona ireo toe-javatra nitranga tamin'ny herinandron'ny famoronana. Ivelan'ny sahan'asa fikarohana ataon'ny siansa izy ireo noho ny antony roa, fara-fahakeliny: Voalohany, zavatra miavaka izy ireo. Ny zavatra miavaka dia toe-javatra tsy miseho afa-tsy indray mandeha ihany. Sarotra amin'ny siansa ny misahana ny zavatra miavaka, satria tsy
afaka miverina izy ireny ka tsy azo tsapaina amin'ny fisehon-javatra samy hafa. Faharoa, mihoatra ny herin'olombelona ny nahatonga ireo toe-javatra niseho tamin'ny famoronana. Tsy vokatry ny fomba ihazonan'Andriamanitra ny famoronana, izay vokatra mandeha ho azy ('naturels'), izy ireo, fa asan'Andriamanitra manokana, mivantana. Tsy misahana afa-tsy ny anton-javatra fanampiny ('causes secondaires') mantsy ny siansa, ary tsy manaiky ny fanazavana rehetra miankina amin'ny asa ataon'Andriamanitra mivantana izy - raha ny fomba fiasany ankehitriny aloha. Ary satria tsy manam-paharoa sy mihoatra ny herin'olombelona ireo toe-javatra nitranga tamin'ny famoronana, dia mipetraka any ivelan'ny faritra tratry ny siansa izy ireo.
Ny maha-zava-dehibe io hevitra asongadina io dia ity: ny fomba fijerin'ny olona iray ny fototra niandohana dia misy akony lehibe amin'ny fomba fijeriny ny toetry ny olombelona sy ny maha-izy azy. Zava-dehibe loatra ny fahafantarana ny fototra niandohantsika, izany no nahatonga an'Andriamanitra nametraka azy ho lohahevitra voalohany ao amin'ny Baiboly, ary ny hafatra entin'ny Baiboly dia mifototra amin'ny maha-ara-tantara ny tantaran'ny famoronana. Ny fihamboana hoe azontsika hianarana amin'ny alalan'ny siansa ny tena tantaran'ity izao tontolo izao misy antsika ity dia fihamboana fa azo hazavaina tsy mila ny asa ataon'Andriamanitra mivantana izany, ary fahadisoana iray mitarika ho amin'ny fahadisoana maro hafa izany.
"Hiezaka hanazava ny asa famoronana, izay tsy nambaran'Andriamanitra na oviana na oviana, avy amin'ny anton-javatra mandeha ho azy ('naturels') ny olona. Tsy takatry ny siansan'ny olombelona anefa ireo zava-miafina an'Ilay Andriamanitry ny lanitra, ary tsy hainy hazavaina ireo asa famoronana mahatalanjona, izay fahagagana avy amin'ny hery tsitoha, tahaka ny tsy hahaizany maneho ny fomba nisian'Andriamanitra." - SP, b. 1, t. 89.
Lohahevitra misongadina manerana ny Baiboly manontolo ny famoronana. Misy porofo ve maneho fa nanana fomba fijery samy hafa momba ny famoronana ireo mpanoratra ao amin'ny Baiboly, na nisy tamin'izy ireo nisalasala ny amin'ny fahamarinan'ny ampahany anankiray amin'ny fanambarana ao amin'ny Genesisy? Nahoana no misy lanjany lehibe ny valin'io fanontaniana io?
Araka ny hevitrao, inona ireo antony mety omen'ny olona hanamarinana ny fandavana ny hevitra hoe nisy namolavola ny zavaboary?
Nanaiky ny fahefan'i Mosesy i Jesösy (Lio. 16:29-31), anisan'izany ny tantaran'ny famoronana (Mar. 2:27, 28; Mat. 19:4-6). Eo anatrehan'izany tontolon'ny toe-javatra nitranga tamin'ny lasa izany sy ny ohatra nasehon'i Jesösy, inona no tokony ho fomba fisainantsika manoloana ny tantaran'ny famoronana